Cayaaraha Dowlad-Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir – Africa Sports Network
Jul 20, 2016 FAAQIDAADA CAYAARAHA 0 2265 Views By Tajuddin
Waxaa si hamsami leh Garoonka Kubadda cagta ee Banaadir satadium uga soconaya tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada.
Muqdisho, Soomaaliya ( AFRICASPORTS.NET) – Sport waxaa loo qabtaa si loo dhiirri geliyo isdhexgalka bulshada. Waxaa shaqo loogu abuuraa cayaartooyda, macallimiinta iyo tababbarayaasha, Madaxda iyo maamulayaasha iyo inta kale ee shaqooyinkooda ama ganacsigoodu uu toos ugu xiran yahay cayaaraha. Waxaa laga soo saaraa lacag. Waxaa shacabka looga dhigaa madaddaalo ay xiiseeyaan oo farxaddooda ka qeyb qaadata. Wuxuu wax ka taraa caafimaadka inta cayaarta iyo inta ku madaddaasha.
Dalka UK hadda waxaa Jaamacadaha qaarkood ay shahaadda Master ku bixiyaan Ganacsiga Kubbadda Cagta iyo maamulka Sportiga – Sport Management and the Business of Football (MSc).
W/qoray warbixintan : Yusuf Garaad Omar
Cayaaraha Dowlad-Goboleedyada, Sport Management and the Business of Football (MSc)
Ciyaartoyda Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe oo u gudbay Semifinalka cayaaraha maamul goboleedyada Xulalka kala matalaya Maamulada Puntland iyo Banaadir oo barbar dhac galay
Xulalka kala matalaya Maamulada Puntland iyo Banaadir oo barbar dhac galay
Muqdisho, Soomaaliya ( AFRICASPORTS.NET) - Xulalka Maamul goboleedyada Puntland iyo Banaadir oo maanta ku kulmay mid ka mid ah ciyaaraha...